Iindaba-Ukusetyenziswa kwekhamera ye-3-axis yokuzinzisa ikhamera ye-gimbal
Ukusetyenziswa kwekhamera ye-gimbal ye-3-axis kuzinzo kuhola wendlela
Ngokwesiko, ukubeka esweni uhola wendlela kusekwe kwi-IPC, i-ITC, iDome kunye nezinye izixhobo ukufezekisa ukubekwa kweliso ngexesha lezithuthi. Ezi zisombululo zisetyenziswe iminyaka emininzi kwaye zikhulile. Nangona kunjalo, ngophuhliso lomjikelo omtsha wolwazi lwendlela, iintsilelo ziyacaciswa ngokuthe chu: indawo yokujonga esweni ineendawo ezingaboniyo, kwaye i-IPC / ITC inokufikelela kuphela kulungiso. I-Dome / PTZ inokuguquguquka okungcono, kodwa ukuhambisa ngokupheleleyo ukufezekisa iimfuno zendawo engaboniyo kuyonyusa iindleko zeprojekthi.
Isithuthi senqwelomoya esingamiselwanga (UAV) sisisombululo esongezelelekileyo sokujikeleza kuhola wendlela. I-UAV iba ngumncedi olungileyo wamapolisa endlela. E-china, i-UAV patrolmen ziye zithunyelwa ukuba ziqhube ukujikeleza ukulawulwa kwezithuthi ezindleleni, ukuphulwa kwezothutho, ukulahlwa kwengozi yezithuthi.
Ikhamera ye-UAV yenkampani yethu ene-3-axis gimbal stabilizer inezi zinto zilandelayo:
1. Ukungena ngaphandle kwesitayile kunye neenkqubo esele zikho, inkxaso yokufikelela kwi-ONVIF, umgama omde kakhulu, ukuhanjiswa kwevidiyo okwenyani yexesha lokwenyani ubuyela kwiholo yomyalelo.
2.Ukusondeza okubonakalayo okungama-30X / 35X, ukubanjwa okuphezulu kwezithuthi ezingekho semthethweni, ukucaciswa okucacileyo kwepleyiti yelayisensi yezithuthi.Compression iziphumo zelahleko kwinkcazo. Nxibelelana nabathengi ngomfanekiso wokuqala.
3. Ncedisa ekujonganeni noxinano ezindleleni kunye neengozi zendlela.
4. Ukubeka iliso kwindlela engxamisekileyo.
5. Ukulandela umkhondo okrelekrele.
6. Inqanaba leenkwenkwezi elikhanyayo elikhanyayo elibonakalayo lokusondeza ikhamera ngekhamera ye-thermal imaging ukufezekisa ukubeka esweni imini nobusuku.
7. Ukuthunyelwa ngokulula, ukuphendula ngokukhawuleza.